Nkuzi: Learningmụta iji vektoji na Inkscape | Site na Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Imebe, GNU / Linux, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Vector ... gini bụ vektọ? ... vector, ma ọ bụ vector, bụ nke (akọwapụtara n'ụzọ dị mfe) enwere ike ịbawanye ihe niile ha chọrọ, ọ naghị agbagha ntakịrị, anaghị efunahụ ogo, na ihe ijuanya na-adịchaghị ala (KBs) karịa nke yiri ya na usoro ọzọ .
Achọrọ m ịkekọrịta nkuzi (PDF) nke m chọtara n'oge gara aga na Nzukọ MCAnime, ebe a kọwara ya n’ụzọ zuru ezu ihe vekto bụ, uru ya, na otu esi agbanwe ihe onyonyo dabara na vector, chekwaa ọtụtụ ohere ma nweta ọtụtụ n’ihe gbasara ogo.
A na-eji ya n'ụzọ doro anya InkscapeO nwere otutu onyonyo ma akowa ihe nile n'uzo di nfe 😀
Mụta iji eserese (nkuzi site Kurobyte)
Kporie ya, aga m amata vectorize onyonyo ụfọdụ hahahaha ... my avatar ihe atụ 😀
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Imebe » Nkuzi: Learningmụta iji Veksize na Inkscape
Na-agbadata, ka anyị hụ ma nke a mere ka nka inkscape m. Daalụ maka ịkekọrịta!
Maka ihe ọ bụla 😀
Ke akpa ilekiri o yiri ka ọ bụ nnọọ ihe ọma ma didactic. Ugbu a, enweghị m ike ileghara anya na ederede dị egwu. Ọ bụrụ na m nwere ike ịgbanwe pdf n'ụzọ ụfọdụ, m ga-eji ọlyụ mezie nke a na dọkụmentị. Ana m ekwu nke a dị ka ihe ndepụta naanị, n'ihi na, tupu nke a, enwere m ekele maka nkuzi a.
Ọ na-eme na ọ bụghị m mere PDF, ị nwere ike ibudata ya ma jiri ngwaọrụ edezi ya, ma ọ bụ ihe yiri nke a ... Ọ dị m nwute na enweghị m ike inyere gị aka nke ukwuu, ọ bụrụ na m mere PDF, m ga-enye gị ODT n'enweghị nsogbu, mana ọ bụghị ya 🙁
Nwere ike ime ya na pdfedit 😛 Echetara m mgbe m hụrụ ya na Synaptic ogologo oge gara aga ...
Lee njikọ a http://screencasters.heathenx.org/, ọ nyeere m aka ịghọta ikike Inkscape.
Ezigbo nkuzi iji bido na Inkscape KZKG ^ Gaara
Daalụ maka ịza ajụjụ 🙂
Aga m anwale ya, enwere m mmasị.
Inkscape na-ejikwa x11 eme ihe na osx ma dikwa egwu uu, aga m eji corel draw na inkscape na Linux.
Kwụsị bullshit m ji Inkscape na Mac na-enweghị nsogbu ọ bụla, ihe ị ga - eme abụghị iche maka ndị ahụ.
Maka m ọdịdị bụ ihe kachasị mkpa, yabụ jọrọ njọ agaghị abanye pc XD m
Bịanụ, ị na-ahọrọ mmemme nke na-eme nzuzu na ị na-eche mana nke ahụ dị ka ọkụkọ ọkụ (a na-eleghara ihe ị masịrị gị ebe a) na prorgam dị oke egwu ma dị njọ karịa nke nwere abụba nke carcamal ahụ na-amasị.
na -eme nke ọma
Nke a ọ pụtara? 😀
Know maara na m na-eji netbook
Ya .. Gịnịkwa bụ ọsọ mgbe a na-ede?
Mba, oburu na ichoro, anam ede ihe n’iti na nkeji obula, bia ... ¬¬
Ọ bụrụ na m nwere mmemme jọrọ njọ mana ọ bụ 10, anaghị m eji ya, ọ bụrụ na m nwere mmemme mara mma mana ọ bụ 8, mgbe ahụ m ga-arapara na nke ahụ. Ihe atụ ị setịpụrụ karịrị akarị.
Abụ m igwe isi, ya mere m jiri nye gị ihe atụ ndị ahụ, ọ bụrụ na ọ bụ, ị mara onye gaara enye gị ntakịrị mkpọtụ hahahahaha.
Otu ga-amasị m maka Karbon 🙂
Uff, aga m ahụ ma m ga-ahụ haha ​​ọ bụla, mana enweghị m ike ijisi gị ike… Inkscape mara nke ọma karịa Karbon, yabụ o siri ike ịchọta nkuzi maka nke abụọ a.
Hyoga nkwa dijo
Zaghachi Hyoga Assure
Obi uto ^ _ ^
Inkscape dị oke njọ adịghị maka Chakra ...
Ọ nweghị ike ịbụ, gbalịa:
Ọ bụghị na budles ?? http://www.chakra-project.org/packages/index.php?act=search&subdir=&sortby=date&order=ascending&searchpattern=inkscape * .cb
WTF !! mba a? O_O ... ọ bụghị na nchịkwa gọọmentị, ọbụnadị na AUR ma ọ bụ ihe yiri ya?
Ọ pụghị ịbụ, ọ bụ na nke Arch na nke ọtụtụ n'ime distros
Ọ dị na ngwugwu na ccr chakra-project.org/packages/index.php?act=search&subdir=&sortby=date&order=ascending&searchpattern=inkscape*.cb
Dị ka gimp, firefox, chromium.
Ọ bụghị na nchịkwa gọọmentị n'ihi na ọ bụ gtk +
Ekwesịrị m ịsị na ọ ka mma ịwụnye nke ccr n'ihi na ọ kaara m mma. Amaara m na a na-ekwu na ngwungwu ndị ahụ bụ otu na arụmọrụ mana na ule m achọpụtala m arụmọrụ ahụ ọfụma karịa ọkachasị mgbe mmalitere mmemme na mmemme agbakọtara agbanyeghị na anaghị m alụ ọgụ na ngwungwu ndị ahụ.
Ọfọn daalụ maka tuto nke dị mma KZKG ^ Gaara na ị ga-eme ememme n'ihi na Madrid meriri hahaha na m ọzọ na football na ibe kọmputa ... nke ọma na ọ bụghị ihe niile dị na ndụ a bụ pc hahaha Ekele.
Odi nma na m nwute maka windo nke bu nwa oge xd daalụ maka na m nwetachaa ọkọ
hahahaha ee, ezigbo obi uto maka mmeri hehehehehehehe. Ugbu a ọ bụ ụbọchị Tuzdee ka ị hụ ihe ga-eme na Barca-Chelsea, wee ruzie na Wednesde Madrid-Bayern 😀
Ọ dị njọ na m nyere Corel Draw na ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma amaara m otu esi eji Inkscape.
Emechara m tinye Inkscape ma na-achọ ụfọdụ nkuzi 🙂 Nke a ga-ezu oke ibido, daalụ maka ịkekọrịta.
Ọfọn, a tụfuola ya, ma ọ bụrụ na mụ onwe gị, onye ị bụ carcamal, enwere m ike ijikwa ya, leezie
Ebee ka m ga-esi nweta nzụlite dị n’isi nke post
Obi ike njikọ agbajikwa
Hahaha nke ahụ bụ nwoke egwuregwu hahahaha.
Ama m, ọ bụ ya mere m ji aza gị
YAY ~ Achọọla m na m ga-arụ ọrụ na ụgwọ m ji gị ụnụ; w;
Ọ bụ oge carcamal, na aja aja chere na owu na-ama
Nye kwa ya otu ihe ahu ... Gi na ochicho gi nke gi gbasara gi na Gaara
Are bụ naanị onye nọ n'afọ ndụ gị ebe a hahaha
Enwere ike onye kọwaara m otu m ga - esi ebipụta grajentị na inkscape, ?? M na - eji Linux Mint, yana n’igwe ahụ m na - ahụ grajentị ahụ nke ọma mana mgbe ị na - ebi akwụkwọ, agba agbaghị obere gradients.
Tughari / dozie applets Cinnamon